Myth: के मास्कले कोरोनाभाइरसबाट बचाउन सक्छ ?
कुल संक्रमित: 101360518
मृत्यु संख्या: 2181054
निको हुनेको संख्या: 73221461
Fact: यदि तपाईं संक्रमित कसैसँग घनिष्ठ सम्पर्कमा हुनहुन्छ भने, मास्कले रोग सर्ने गर्ने संभावनालाई कम गर्छ । तर अनुहारमा मास्क लगाउनु भनेको पक्कैपनि फलामको पहिरनको ग्यारेन्टी दिनु होइन । भाइरस आँखाको साना भाइरल कणहरु मार्फत सर्न सक्छ, जसलाई एरोसोल भनेर चिनिन्छ, यो मास्कमा पनि छिर्न सक्छन ।
भ्रम: के मास्कले कोरोनाभाइरसबाट बचाउन सक्छ ?
यथार्थ: यदि तपाईं संक्रमित कसैसँग घनिष्ठ सम्पर्कमा हुनहुन्छ भने, मास्कले रोग सर्ने गर्ने संभावनालाई कम गर्छ । तर अनुहारमा मास्क लगाउनु भनेको पक्कैपनि फलामको पहिरनको ग्यारेन्टी दिनु होइन । भाइरस आँखाको साना भाइरल कणहरु मार्फत सर्न सक्छ, जसलाई एरोसोल भनेर चिनिन्छ, यो मास्कमा पनि छिर्न सक्छन ।